Science Fiction – Alpha Premium
Moonfall (2022) ##unicode စိတ်ကူးယဉ်သိပ္ပံကားကောင်းတွေမှကြိုက်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက် "Moonfall" ဆိုတဲ့အသစ်ထွက် ဇာတ်ကားကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Box office မှာလည်း ၄၁.၂ သန်းအထိ ရရှိအောင်မြင်ထားတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ လကမ္ဘာမှာထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကြောင့်လရဲ့ပတ်လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားပြီး ကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့အနီးကပ်ဆုံးကိုချဉ်းကပ်လာပါတယ် ဒီလိုသာလကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းပုံမှန်ပြန်မဖြစ်သွားဘူးဆိုရင်မြို့တစ်မြို့စာလောက်ရှိတဲ့ ဥက္ကာခဲအပိုင်းအစတွေက ကမ္ဘာမြေပေါ်ကိုကျလာပြီးလူသားအားလုံးသေဆုံးသွားရနိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့်နာဆာအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးလကမ္ဘာပေါ်မှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေလဲဆိုတာသိရှိနိုင်ဖို့အာကာသပညာရှင် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုစေလွှတ်လိုက်ပါတယ် အဲ့ဒီမှာပဲမထင်မှတ်ထားတဲ့နည်းပညာမြင့်စက်ပစ္စည်းတစ်ခုဟာအာကာသယာဉ်တွေကိုဖျက်ဆီးပြီး လိုက်ပါလာတဲ့သူတွေကိုလည်းသတ်ဖြတ်လိုက်တာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့... နာဆာအဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ကို ဘယ်လိုကယ်တင်သွားမလဲ လပတ်လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားရလောက်အောင်စွမ်းအားကြီးတဲ့ထူးဆန်းတဲ့စက်ပစ္စည်းကရော အာကာသကြီးထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်တည်ခဲ့လာတာလဲဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi စိတ္ကူးယဥ္သိပၸံကားေကာင္းေတြမွႀကိဳက္တဲ့ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ "Moonfall" ဆိုတဲ့အသစ္ထြက္ ဇာတ္ကားေကာင္းေလးကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ Box office မွာလည္း ၄၁.၂ သန္းအထိ ရရွိေအာင္ျမင္ထားတဲ့ကားေလးျဖစ္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းကိုေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လကမာၻမွာထူးဆန္းတဲ့ျဖစ္ရပ္တစ္ခုေၾကာင့္လရဲ႕ပတ္လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားၿပီး ကမာၻေျမႀကီးနဲ႔အနီးကပ္ဆုံးကိုခ်ဥ္းကပ္လာပါတယ္ ဒီလိုသာလကမာၻပတ္လမ္းေၾကာင္းပုံမွန္ျပန္မျဖစ္သြားဘူးဆိုရင္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕စာေလာက္ရွိတဲ့ ဥကၠာခဲအပိုင္းအစေတြက ကမာၻေျမေပၚကိုက်လာၿပီးလူသားအားလုံးေသဆုံးသြားရႏိုင္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္နာဆာအဖြဲ႕အစည္းကေနၿပီးလကမာၻေပၚမွာဘာေတြျဖစ္ပ်က္ေနလဲဆိုတာသိရွိႏိုင္ဖို႔အာကာသပညာရွင္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကိုေစလႊတ္လိုက္ပါတယ္ အဲ့ဒီမွာပဲမထင္မွတ္ထားတဲ့နည္းပညာျမင့္စက္ပစၥည္းတစ္ခုဟာအာကာသယာဥ္ေတြကိုဖ်က္ဆီးၿပီး လိုက္ပါလာတဲ့သူေတြကိုလည္းသတ္ျဖတ္လိုက္တာကိုျမင္ေတြ႕လိုက္ရတဲ့အခါမွာေတာ့... နာဆာအဖြဲ႕ႀကီးအေနနဲ႔လူသားမ်ိဳးႏြယ္ကို ဘယ္လိုကယ္တင္သြားမလဲ လပတ္လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားရေလာက္ေအာင္စြမ္းအားႀကီးတဲ့ထူးဆန္းတဲ့စက္ပစၥည္းကေရာ အာကာသႀကီးထဲမွာဘယ္လိုျဖစ္တည္ခဲ့လာတာလဲဆိုတာကိုေတာ့ဇာတ္လမ္းထဲမွာ ဆက္လက္ၾကည့္ရႈေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1.2GB,2.5GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL ,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & Hmue Encoded by Arrow ========================================================================= GDtot လင့္ေဒါင္းနည္း (အစိမ္းျပထားတာကိုကလစ္ပါ) GDtot (uc browser ကိုသုံးရင်ပိုကောင်းပါတယ်) Mega.nz Link ဒေါင်းနည်း Gdrive Link ဒေါင်းနည်း
The Calm Beyond (2022) ##unicode ဒီဇာတ်ကားကတော့ ဟောင်ကောင်မြို့ကို ဆူနာမီမုန်တိုင်းဝင်ပြီးအချိန်မှာ တစ်မြို့လုံးရေတွေလွှမ်းမိုးသွားတဲ့အချိန်ကိုရိုက်ကူးပြထားတဲ့ thriller dramaဇာတ်ကားကောင်းပါ တစ်မြို့လုံးရေတွေလွှမ်းသွားတဲ့နောက်မှာ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့လူတွေဟာ စားစရာနဲ့နေစရာတွေကိုလုယက်ပြီး အသက်ရှင်ခဲ့ရပါတယ် အာရှာကတော့ ဆူနာမီမုန်တိုင်းမှာ မိဘတွေနဲ့ညီမ‌လေးကိုဆုံးရူံးခဲ့ရပြီး တစ်ယောက်တည်းအသက်ရှင်နေခဲ့ရသူပါ တစ်နေ့မှာတော့ သူ့လိုပဲ အဖော်မရှိတဲ့ကလေးမလေးတစ်ယောက်က သူ့ဆီကို မျက်စိလည်လမ်းမှားပြီးရောက်လာခဲ့ပါတယ် အဲဒီကလေးမကိုမြင်ရင် သူ့ညီမလေးကိုသတိရမိတဲ့ အာရှာဟာ သူ့ညီမလေးလိုပဲကလေးလေးကိုစောင့်ရှောက်ထားခဲ့ပါတယ် စားစရာရှားပါးတဲ့ ဟောင်ကောင်မြို့ပျက်ကြီးမှာ လုယက်ဖျက်စီးတတ်တဲ့လူယုတ်မာတွေရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဟာ သူတို့ဆီကိုတည့်တည့်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့နှစ်ယောက် ခေတ်ပျက်ကြီးမှာ ဘယ်လိုအသက်ရှင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြမလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာစောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်လို့ အားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ကို ဆူနာမီမုန္တိုင္းဝင္ၿပီးအခ်ိန္မွာ တစ္ၿမိဳ႕လုံးေရေတြလႊမ္းမိုးသြားတဲ့အခ်ိန္ကို႐ိုက္ကူးျပထားတဲ့ thriller dramaဇာတ္ကားေကာင္းပါ တစ္ၿမိဳ႕လုံးေရေတြလႊမ္းသြားတဲ့ေနာက္မွာ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့လူေတြဟာ စားစရာနဲ႔ေနစရာေတြကိုလုယက္ၿပီး အသက္ရွင္ခဲ့ရပါတယ္ အာရွာကေတာ့ ဆူနာမီမုန္တိုင္းမွာ မိဘေတြနဲ႔ညီမ‌ေလးကိုဆုံး႐ူံးခဲ့ရၿပီး တစ္ေယာက္တည္းအသက္ရွင္ေနခဲ့ရသူပါ တစ္ေန႔မွာေတာ့ သူ႔လိုပဲ အေဖာ္မရွိတဲ့ကေလးမေလးတစ္ေယာက္က သူ႔ဆီကို မ်က္စိလည္လမ္းမွားၿပီးေရာက္လာခဲ့ပါတယ္ အဲဒီကေလးမကိုျမင္ရင္ သူ႔ညီမေလးကိုသတိရမိတဲ့ အာရွာဟာ သူ႔ညီမေလးလိုပဲကေလးေလးကိုေစာင့္ေရွာက္ထားခဲ့ပါတယ္ စားစရာရွားပါးတဲ့ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ပ်က္ႀကီးမွာ လုယက္ဖ်က္စီးတတ္တဲ့လူယုတ္မာေတြရဲ႕ေဘးအႏၲရာယ္ဟာ သူတို႔ဆီကိုတည့္တည့္ေရာက္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ေခတ္ပ်က္ႀကီးမွာ ဘယ္လိုအသက္ရွင္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကမလဲဆိုတာ ဒီဇာတ္ကားမွာေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲျဖစ္လို႔ အားေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Hmue File Size – 900MB,2GB Format…mp4 Quality :,720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by ...
Project Gemini (2022) ##unicode Project Geminiဇာတ်ကားကတော့ Russian သိပ္ပံပညာဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ကမ္ဘာမြေမှာ ထူးဆန်းတဲ့အပင်ဗိုင်းရပ်စ်တစ်ခုပျံနှံလာတဲ့အတွက် ဂေဟာစနစ်ထိခိုက်လာကာ ကမ္ဘာမြေကအပင်တွေအားလုံးသေကြေပျက်စီးသွားခဲ့တယ်။ အောက်ဆီဂျင်%က တစ်ဖြေးဖြေးလျှော့နည်းလာတဲ့အတွက် လူသားမျိုးနွယ်မျိုးသုဉ်းမဲ့ကပ်ဘေးဟာ နီးကပ်လာခဲ့တယ်။ Dr.Steveဦးဆောင်တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့ဟာ လူသားတွေအသက်ရှင်နိုင်မဲ့ကမ္ဘာဂြိုလ်ကိုဖန်တီးဖို့ အတွက် TESSဂြိုလ်ကိုစေလွှတ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယာဉ်လွှတ်တင်တဲ့‌အချိန်မှာ မတော်မဆဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ အာကာသထဲကအမည်မသိနေရာတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်။ မစ်ရှင်ကိုအောင်မြင်ဖို့De.Steveတို့အဖွဲ့ကြိုးစားနေတုန်းမှာ သူတို့ယာဉ်ပေါ်မှာ ထူးဆန်းတဲ့ သက်ရှိတစ်မျိုးရောက်ရှိနေကြောင်းသိလိုက်ရတယ်။Dr.Steveတစ်ယောက်လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အနာဂတ်ကို ကယ်ဆယ်နိုင်မလားဆိုတာကို ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Project Geminiဇာတ္ကားကေတာ့ Russian သိပၸံပညာဇာတ္ကားတစ္ကားျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ကမာၻေျမမွာ ထူးဆန္းတဲ့အပင္ဗိုင္းရပ္စ္တစ္ခုပ်ံႏွံလာတဲ့အတြက္ ေဂဟာစနစ္ထိခိုက္လာကာ ကမာၻေျမကအပင္ေတြအားလုံးေသေၾကပ်က္စီးသြားခဲ့တယ္။ ေအာက္ဆီဂ်င္%က တစ္ေျဖးေျဖးေလွ်ာ့နည္းလာတဲ့အတြက္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ိဳးသုဥ္းမဲ့ကပ္ေဘးဟာ နီးကပ္လာခဲ့တယ္။ Dr.Steveဦးေဆာင္တဲ့ သိပၸံပညာရွင္အဖြဲ႕ဟာ လူသားေတြအသက္ရွင္ႏိုင္မဲ့ကမာၻၿဂိဳလ္ကိုဖန္တီးဖို႔ အတြက္ TESSၿဂိဳလ္ကိုေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရတယ္။ဒါေပမဲ့ယာဥ္လႊတ္တင္တဲ့‌အခ်ိန္မွာ မေတာ္မဆျဖစ္ခဲ့ၿပီးေတာ့ အာကာသထဲကအမည္မသိေနရာတစ္ခုကိုေရာက္ရွိသြားခဲ့တယ္။ မစ္ရွင္ကိုေအာင္ျမင္ဖို႔De.Steveတို႔အဖြဲ႕ႀကိဳးစားေနတုန္းမွာ သူတို႔ယာဥ္ေပၚမွာ ထူးဆန္းတဲ့ သက္ရွိတစ္မ်ိဳးေရာက္ရွိေနေၾကာင္းသိလိုက္ရတယ္။Dr.Steveတစ္ေယာက္လူသားမ်ိဳးႏြယ္ရဲ႕အနာဂတ္ကို ကယ္ဆယ္ႏိုင္မလားဆိုတာကို ၾကည့္ရႈၾကပါအုံး။ Review – Myet Chel File Size – 900MB,2GB Format…mp4 Quality :,720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Myet Chel Encoded by Arrow
AI Love You (2022) ##unicode တကယ့်ဒိတ်ဒိတ်ကြဲတွေဖြစ်တဲ့မင်းသား Mario Maurer နဲ့ မင်းသမီး Baifern Pimchnok တို့ရဲ့ "AI Love You" ဆိုတဲ့ကားလေးထွက်ရှိလာပါပြီ ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကတော့အနာဂတ်သိပ္ပံနည်းပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့အချိန်မှာလူသားတွေရဲ့ တီထွင်ဖန်တီးမှုကဘယ်လောက်တောင်တိုးတက်လာလဲဆိုရင်အဆောက်အဦးကြီးတွေမှာက အစ AI စနစ်တွေကိုထည့်သွင်းထားပြီးတစ်ဦးချင်းဆက်သွယ်လို့ရတဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ် ဒီမှာဆိုရင်လာနာဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာနေ့တိုင်းဒေါ့ဘ်ဆိုတဲ့ AI နဲ့တရင်းတနှီးစကားပြောရင်း AI ဒေါ့ဘ်လေးကလာနာကိုချစ်မိသွားပါတော့တယ် ဒါပေမယ့်လာနာကတော့ AI ဆိုတာဟာခံစားချက်မရှိကြောင်း လူသားတွေနဲ့ချစ်ကြိုက်လို့မရကြောင်းအမြဲတမ်းပြောတာပေါ့ ဒါပေမယ့်တစ်နေ့မှာတော့ပရိုဂရမ်ချို့ယွင်းမှုကြောင့် AI ဒေါ့ဘ်ဟာ ဘော့ဆိုတဲ့လူသားခန္တာကိုယ်ထဲကိုဝင်သွားပါတော့တယ် လူသားဖြစ်သွားတဲ့ဒေါ့ဘ်ဟာလာနာရဲ့ အချစ်ကိုဘယ်လိုရအောင်ကြိုးစားသွားဦးမလဲ အမြဲတမ်းလူသားမဟုတ်လို့ငြင်းခဲ့တဲ့လာနာကရောလူသားအဖြစ် ပြန်ရောက်လာတဲ့ဒေါ့ဘ်ကိုချစ်သွားမှာလားဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ##zawgyi တကယ့္ဒိတ္ဒိတ္ႀကဲေတြျဖစ္တဲ့မင္းသား Mario Maurer နဲ႔ မင္းသမီး Baifern Pimchnok တို႔ရဲ႕ "AI Love You" ဆိုတဲ့ကားေလးထြက္ရွိလာပါၿပီ ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာေလးကေတာ့အနာဂတ္သိပၸံနည္းပညာေတြတိုးတက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာလူသားေတြရဲ႕ တီထြင္ဖန္တီးမႈကဘယ္ေလာက္ေတာင္တိုးတက္လာလဲဆိုရင္အေဆာက္အဦးႀကီးေတြမွာက အစ AI စနစ္ေတြကိုထည့္သြင္းထားၿပီးတစ္ဦးခ်င္းဆက္သြယ္လို႔ရတဲ့အထိျဖစ္လာပါတယ္ ဒီမွာဆိုရင္လာနာဆိုတဲ့ေကာင္မေလးဟာေန႔တိုင္းေဒါ့ဘ္ဆိုတဲ့ AI နဲ႔တရင္းတႏွီးစကားေျပာရင္း AI ေဒါ့ဘ္ေလးကလာနာကိုခ်စ္မိသြားပါေတာ့တယ္ ဒါေပမယ့္လာနာကေတာ့ AI ဆိုတာဟာခံစားခ်က္မရွိေၾကာင္း လူသားေတြနဲ႔ခ်စ္ႀကိဳက္လို႔မရေၾကာင္းအၿမဲတမ္းေျပာတာေပါ့ ဒါေပမယ့္တစ္ေန႔မွာေတာ့ပ႐ိုဂရမ္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ AI ေဒါ့ဘ္ဟာ ေဘာ့ဆိုတဲ့လူသားခႏၲာကိုယ္ထဲကိုဝင္သြားပါေတာ့တယ္ လူသားျဖစ္သြားတဲ့ေဒါ့ဘ္ဟာလာနာရဲ႕ အခ်စ္ကိုဘယ္လိုရေအာင္ႀကိဳးစားသြားဦးမလဲ အၿမဲတမ္းလူသားမဟုတ္လို႔ျငင္းခဲ့တဲ့လာနာကေရာလူသားအျဖစ္ ျပန္ေရာက္လာတဲ့ေဒါ့ဘ္ကိုခ်စ္သြားမွာလားဆိုတာကိုေတာ့ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Drama,Romance Subtitle : ...
The Matrix Resurrections (2021) ##unicode နာမည်ကျော် Keanu Reevesရဲ့ Matrixဇာတ်ကားတွေကတော့ အထူးတလည်မိတ်ဆက်ပေးစရာကိုမလိုအောင် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေဆိုတာအားလုံးသိကြမှာပါ Matrix Revolutions ဇာတ်ကားအပြီး ၁၈နှစ်ကြာမှ The Matrix Resurrectionဆိုပြီး အသစ်ထွက်ရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ် အရင်သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ Keanu Reeves ၊ Carrie-Anne Moss ၊ Lambert Wilsonနဲ့ Jada Pinkett Smithတို့ ပြန်လည်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့အပြင် နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ Yahya Abdul-Mateen IIတို့ Jessica Henwick၊ Jonathan Groff၊ Neil Patrick Harris ၊ Priyanka Chopra Jonasနဲ့ Christina Ricciတို့ပါ အသစ်ပါဝင်ထားတာဖြစ်လို့ တကယ်ကိုနာမည်ကျော်ပေါင်းများစွာတွေနဲ့ epic comeback ဇာတ်ကားလို့ပြောလို့ရပါတယ် ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ နီယိုဟာ သောမတ်စ်အန်ဒါစန်ဆိုတဲ့သာမန်လူအနေနဲ့နေထိုင်နေခဲ့ပြီး သူက တကယ်ရှိနေတာလား အထိန်းချုပ်ခံထားရတာလားဆိုတာပဟေဠိဖြစ်ခဲ့ပါတယ် Morpheusက သူ့ကို အနီရောင်ဆေးတောင့်ကိုထပ်ပေးခဲ့တဲ့အခါမှာ အမှန်တရားကိုသိလာပြီး Matrixလောကကြီးကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ် အဲဒီအချိန်မှာ သူ့ကိုလာရှာတဲ့ Bugsရယ် သူ့အဖွဲ့တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီး ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်မလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်လို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ##zawgyi နာမည္ေက်ာ္ Keanu Reevesရဲ႕ Matrixဇာတ္ကားေတြကေတာ့ ...
Encounter (2021) (App only) (free ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေလဲ app ကနေဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Sci-fic thriller ကားလေးဖြစ်တဲ့ "Encounter" ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားသစ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ဂျေနဲ့ဘော်ဘီတို့ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ဟာသူ့အမေရဲ့ နောက်အိမ်ထောင်ဖြစ်တဲ့ဒိုင်လန်နဲ့အတူနေထိုင်နေရပေမယ့် သူ့အဖေမာလီခ်ကိုအမြဲတမ်းလွမ်းနေကြတာပါ အထူးသဖြင့်အကြီးကောင်လေးဂျေဖြစ်ပါတယ် တစ်ညမှာတော့သူတို့ရဲ့အဖေမာလီခ်ဟာခရီးထွက်မယ်ဆိုပြီး ညမိုးချုပ်ကြီးလာခေါ်ပါတော့တယ် ဂျေဟာသူ့အဖေနဲ့လိုက်လာရင်းနဲ့အခြေအနေကသိပ်ပြီးမူမမှန်တာကိုရိပ်စားမိလာလို့မေးလိုက်တဲ့အခါ ဂြိုဟ်သားတွေရောက်လာပြီးလူတွေရဲ့ခန္တာကိုယ်ထဲမှာကပ်ပါးကောင်အဖြစ်ဝင်ရောက်နေထိုင်နေတယ် လို့ပြောပါတယ် သူ့ရဲ့အမေဟာလည်းကပ်ပါးကောင်ပူးကပ်သွားပြီးစိတ်အခြေအနေပုံမှန်မဟုတ်တော့တဲ့ အတွက်မာလီခ်ဟာသူ့ရဲ့စခန်းချုပ်ကိုသွားရမယ်လို့ပြောပါတယ် မာလီခ်ပြောတဲ့ဂြိုဟ်သားတွေဆိုတာတကယ်ပဲကမ္ဘာပေါ်ကိုရောက်လာတာလား မထင်မှတ်ထားတဲ့ဘယ်လိုအရာတွေကြုံတွေ့ရဦးမလဲဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ။##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ Sci-fic thriller ကားေလးျဖစ္တဲ့ "Encounter" ဆိုတဲ့ ဇာတ္ကားသစ္ေလးကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာေလးကေတာ့ေဂ်နဲ႔ေဘာ္ဘီတို႔ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္ဟာသူ႔အေမရဲ႕ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျဖစ္တဲ့ဒိုင္လန္နဲ႔အတူေနထိုင္ေနရေပမယ့္ သူ႔အေဖမာလီခ္ကိုအၿမဲတမ္းလြမ္းေနၾကတာပါ အထူးသျဖင့္အႀကီးေကာင္ေလးေဂ်ျဖစ္ပါတယ္ တစ္ညမွာေတာ့သူတို႔ရဲ႕အေဖမာလီခ္ဟာခရီးထြက္မယ္ဆိုၿပီး ညမိုးခ်ဳပ္ႀကီးလာေခၚပါေတာ့တယ္ ေဂ်ဟာသူ႔အေဖနဲ႔လိုက္လာရင္းနဲ႔အေျခအေနကသိပ္ၿပီးမူမမွန္တာကိုရိပ္စားမိလာလို႔ေမးလိုက္တဲ့အခါ ၿဂိဳဟ္သားေတြေရာက္လာၿပီးလူေတြရဲ႕ခႏၲာကိုယ္ထဲမွာကပ္ပါးေကာင္အျဖစ္ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ေနတယ္ လို႔ေျပာပါတယ္ သူ႔ရဲ႕အေမဟာလည္းကပ္ပါးေကာင္ပူးကပ္သြားၿပီးစိတ္အေျခအေနပုံမွန္မဟုတ္ေတာ့တဲ့ အတြက္မာလီခ္ဟာသူ႔ရဲ႕စခန္းခ်ဳပ္ကိုသြားရမယ္လို႔ေျပာပါတယ္ မာလီခ္ေျပာတဲ့ၿဂိဳဟ္သားေတြဆိုတာတကယ္ပဲကမာၻေပၚကိုေရာက္လာတာလား မထင္မွတ္ထားတဲ့ဘယ္လိုအရာေတြႀကဳံေတြ႕ရဦးမလဲဆိုတာကိုေတာ့ဇာတ္လမ္းထဲမွာ ဆက္လက္ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1.3GB,2.6GB Format…mp4 Quality : 1080p WEB-DL,720p WEB-DL Genre : Sci-fi, Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & Hmue Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါင်းရန္ App Link မန်ဘာဝင်လိုသူများ viber – 09691177142
IMDB: 5.3/10 1.3k votes
Venom: Let There Be Carnage (2021) ##unicode အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ Venom2ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ကဲ ဒီကားထဲမှာတော့ Venomနှစ်ကောင်တောင် အမိုက်စားတွေ့ရမှာပါ ဘယ်လို Venomနှစ်ကောင်ဖြစ်လာလဲ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ပထမကားမှာ Eddieက သတို့သမီးလောင်းနဲ့လည်းပြတ်၊ အလုပ်လည်းပြုတ်ဖြစ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာပါ ဒါပေမယ့် Venomကတော့ သူ့ကိုယ်ထဲမှာရှိနေဆဲပါပဲ စိတ္တဇလူသတ်သမား Cletus Kasadyကိုဖမ်းနိုင်ဖို့ Eddieကူညီပေးခဲ့တယ် ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ Eddieက သူနာမည်ပြန်ကြီးအောင် Cletusကို အင်တာသွားဗျူးခဲ့တယ် သူ့ကိုသေဒဏ်ပေးခါနီးမှာလည်း Cletusခေါ်လို့ Eddieကသွားတွေ့ခဲ့တယ် ပြဿနာက အဲဒီမှာစလာပါတော့တယ် Venomရဲ့ဇီဝမျိုးကွဲအကောင်ဖြစ်တဲ့ Carnageဆိုတဲ့ကောင်က Cletusရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ် စိတ္တဇလူသတ်သမားက Carnageရဲ့အစွမ်းတွေကို ဘယ်လိုအသုံးချပြီး လူတွေကိုဒုက္ခပေးမလဲ Venomနှစ်ကောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီဇာတ်ကားမှာကြည့်ရူအားပေးကြပါဦး ##zawgyi အားလုံးေစာင့္ေမွ်ာ္ေနတဲ့ Venom2ကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ကဲ ဒီကားထဲမွာေတာ့ Venomႏွစ္ေကာင္ေတာင္ အမိုက္စားေတြ႕ရမွာပါ ဘယ္လို Venomႏွစ္ေကာင္ျဖစ္လာလဲ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းေလးကေတာ့ ပထမကားမွာ Eddieက သတို႔သမီးေလာင္းနဲ႔လည္းျပတ္၊ အလုပ္လည္းျပဳတ္ျဖစ္ခဲ့တာကိုေတြ႕ရမွာပါ ဒါေပမယ့္ Venomကေတာ့ သူ႔ကိုယ္ထဲမွာရွိေနဆဲပါပဲ စိတၱဇလူသတ္သမား Cletus Kasadyကိုဖမ္းႏိုင္ဖို႔ Eddieကူညီေပးခဲ့တယ္ ဒီဇာတ္ကားမွာေတာ့ Eddieက သူနာမည္ျပန္ႀကီးေအာင္ Cletusကို အင္တာသြားဗ်ဴးခဲ့တယ္ သူ႔ကိုေသဒဏ္ေပးခါနီးမွာလည္း Cletusေခၚလို႔ Eddieကသြားေတြ႕ခဲ့တယ္ ...
IMDB: 6.3/10 69,425 votes
Night Raiders (2021) ##unicode Night Raidersဇာတ်ကားမှာတော့ အနာဂတ်မှာ စစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာပြီးနောက်မှာ အာဏာပိုင်တွေက နိုင်ငံက ကလေးတွေကို လေ့ကျင့်သင်ကြပေးဖို့အတွက် မိဘတွေနဲ့ခွဲကာ အတင်းအကြပ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။ Niskaဟာ သမီးဖြစ်သူ Waseeseကို တောထဲမှာ 6နှစ်တိတိ ဝှက်ထားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ရှာဖွေရေးdroneတစ်ခုက သူတို့နေတဲ့နေရာကို ရောက်လာခဲ့တဲ့အတွက် Niskaသူငယ်ချင်း Roberto‌နေရာကို ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။လမ်းခရီးမှာ သမီးဖြစ်သူWaseeseဟာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့ ပိုးဝင်ကာ နေမကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။Robertoက အာဏာပိုင်တွေဆီပို့လိုက်ရင် ကလေးက ဆေးကုသခံရပြီးတော့ ဘဝကောင်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ Niskaကို နားချခဲ့တဲ့အတွက် ရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့ Niskaတစ်ယောက် သမီးကို အာဏာပိုင်တွေလက်ထဲ အပ်လိုက်ရတော့တယ်။Niskaထက်ထားသလို ကလေးတွေက အာဏာပိုင်တွေရဲ့ လက်ထဲမှာကောင်းကောင်းနေရပါ့မလား။Niskaတစ်ယောက်ရော သူ့သမီးနဲ့ ပြန်တွေ့ပါ့မလားဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Night Raidersဇာတ္ကားမွာေတာ့ အနာဂတ္မွာ စစ္ပြဲတစ္ခုျဖစ္လာၿပီးေနာက္မွာ အာဏာပိုင္ေတြက ႏိုင္ငံက ကေလးေတြကို ေလ့က်င့္သင္ၾကေပးဖို႔အတြက္ မိဘေတြနဲ႔ခြဲကာ အတင္းအၾကပ္ေခၚေဆာင္သြားခဲ့တယ္။ Niskaဟာ သမီးျဖစ္သူ Waseeseကို ေတာထဲမွာ 6ႏွစ္တိတိ ဝွက္ထားႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ရွာေဖြေရးdroneတစ္ခုက သူတို႔ေနတဲ့ေနရာကို ေရာက္လာခဲ့တဲ့အတြက္ Niskaသူငယ္ခ်င္း Roberto‌ေနရာကို ထြက္ေျပးခဲ့ရတယ္။လမ္းခရီးမွာ သမီးျဖစ္သူWaseeseဟာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီးေတာ့ ပိုး၀င္ကာ ေနမေကာင္းျဖစ္ခဲ့တယ္။Robertoက အာဏာပိုင္ေတြဆီပို႔လိုက္ရင္ ကေလးက ေဆးကုသခံရၿပီးေတာ့ ဘ၀ေကာင္းတစ္ခုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ...
Finch (2021) ##unicode မင်းသားကြီး Tom Hanks ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့အသစ်ထွက်စိတ်ကူးယဉ်သိပ္ပံကားလေးဖြစ်တဲ့ Finch ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ဖင့်ခ်ျဝှိုင်းဘက်ဆိုတဲ့ဖန်တီးတီထွင်သူတစ်ယောက်ဟာ ကမ္ဘာကြီးပျက်စီးပြီးနောက်ဆိုးရွားတဲ့ရာသီဥတုအစားအသောက်ရှားပါးမှုဒဏ်ကိုအန်တုရင်း ခြောက်ကပ်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာ ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေသူဖြစ်ပါတယ်ဖင့်ခ်ျဟာခွေးလေးတစ်ကောင်နဲ့အတူနေထိုင်ပြီးတစ်ရက်မှာတော့ သူတို့ဆီကိုရောက်လာမယ့်မုန်တိုင်းဒဏ်ကနေအကာအကွယ်ရနိုင်ဖို့တောင်တန်းတွေဘက်ကိုခရီးထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ် ဒီခရီးမှာတော့ဖင့်ခ်ျနဲ့အတူသူတီထွင်ထားတဲ့စက်ရုပ်လေးဖြစ်တဲ့ဂျက်ဖ်လည်းအတူပါလာပါတယ် အန္တရာယ်များတဲ့ခရီးကြမ်းထဲမှာစက်ရုပ်ဂျက်ဖ်ဟာဖင့်ချ်တို့အတွက်အသုံးဝင်တဲ့စက်ရုပ်လေးဖြစ်လာပါတော့တယ် ခရီးတစ်လျှောက်လုံဖင့်ခ်ျနဲ့စက်ရုပ်လေးဂျက်ဖ်တို့ဘယ်လိုအခက်အခဲခရီးကြမ်းတွေကိုအတူဖြတ်ကျော်ကြမလဲ အားလုံးအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့စိတ်ချလုံခြုံတဲ့နေရာကိုအရောက်သွားနိုင်မှာလားဆိုတာကို‌ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့်ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi မင္းသားႀကီး Tom Hanks ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့အသစ္ထြက္စိတ္ကူးယဥ္သိပၸံကားေလးျဖစ္တဲ့ Finch ဆိုတဲ့ဇာတ္ကားေလးကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာေလးကေတာ့ဖင့္ခ္်ဝႈိင္းဘက္ဆိုတဲ့ဖန္တီးတီထြင္သူတစ္ေယာက္ဟာ ကမာၻႀကီးပ်က္စီးၿပီးေနာက္ဆိုး႐ြားတဲ့ရာသီဥတုအစားအေသာက္ရွားပါးမႈဒဏ္ကိုအန္တုရင္း ေျခာက္ကပ္ေနတဲ့ကမာၻႀကီးမွာ ရွင္သန္ေနထိုင္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားေနသူျဖစ္ပါတယ္ဖင့္ခ္်ဟာေခြးေလးတစ္ေကာင္နဲ႔အတူေနထိုင္ၿပီးတစ္ရက္မွာေတာ့ သူတို႔ဆီကိုေရာက္လာမယ့္မုန္တိုင္းဒဏ္ကေနအကာအကြယ္ရႏိုင္ဖို႔ေတာင္တန္းေတြဘက္ကိုခရီးထြက္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္ ဒီခရီးမွာေတာ့ဖင့္ခ္်နဲ႔အတူသူတီထြင္ထားတဲ့စက္႐ုပ္ေလးျဖစ္တဲ့ဂ်က္ဖ္လည္းအတူပါလာပါတယ္ အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ခရီးၾကမ္းထဲမွာစက္႐ုပ္ဂ်က္ဖ္ဟာဖင့္ခ်္တို႔အတြက္အသုံးဝင္တဲ့စက္႐ုပ္ေလးျဖစ္လာပါေတာ့တယ္ ခရီးတစ္ေလွ်ာက္လုံဖင့္ခ္်နဲ႔စက္႐ုပ္ေလးဂ်က္ဖ္တို႔ဘယ္လိုအခက္အခဲခရီးၾကမ္းေတြကိုအတူျဖတ္ေက်ာ္ၾကမလဲ အားလုံးအႏၲရာယ္ကင္းကင္းနဲ႔စိတ္ခ်လုံၿခဳံတဲ့ေနရာကိုအေရာက္သြားႏိုင္မွာလားဆိုတာကို‌ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ၾကည့္ရႈရမယ့္ဇာတ္ကားေကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္ Review – Phyu Sin File Size – 2.5GB,1.3GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Drama,Sci-fi Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & Hmue Encoded by Arrow
White Sky (2021) (App member only) ##unicode The White Skyဇာတ်ကားမှာတော့ Haileyဟာ သူမရည်းစား Joshနဲ့အတူ ညီမလေးSenninaကိုခေါ်ပြီးတော့ တောအုပ်ထဲအားလပ်ရက်ခရီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့တောအုပ်ထဲမှာ စခန်းချနေတုန်းမှာ ဂြိုလ်သားတွေရဲ့ ယာဉ်ပျံတစ်စီးက ကမ္ဘာကြီးပေါ်ရောက်လာပြီးတော့ ကမ္ဘာပေါ်ကလူတွေကိုတိုက်ခိုက်တော့ပါတယ်။ တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတဲ့လူတွေသာ အသိစိတ်တွေပျောက်ဆုံးကာ ခန္ဓာကိုယ်တွေလဲထိန်းချုပ်လို့မရတော့ဘဲနဲ့ အခြားလူတွေကိုပါလိုက်တိုက်ခိုက်တော့တယ်။Haileyတို့သုံးယောက်လဲအဲ့ထူးဆန်းတဲ့သတ္တဝါတွေလက်က လွှတ်‌မြောက်အောင်ထွက်ပြေးရတော့တယ်။‌လမ်းမှာ Liamဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးတော့ Liamဟာ သူပုန်းနေတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တယ်။ Haileyတို့သုံးယောက်သား အသက်ရှင်ပါ့မလား။Liamဆိုတဲ့လူကရော ယုံကြည်ရတဲ့လူဖြစ်ပါ့မလားဆိုတာကိုကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi The White Skyဇာတ္ကားမွာေတာ့ Haileyဟာ သူမရည္းစား Joshနဲ႔အတူ ညီမေလးSenninaကိုေခၚၿပီးေတာ့ ေတာအုပ္ထဲအားလပ္ရက္ခရီးထြက္လာခဲ့ပါတယ္။သူတို႔ေတာအုပ္ထဲမွာ စခန္းခ်ေနတုန္းမွာ ၿဂိဳလ္သားေတြရဲ႕ ယာဥ္ပ်ံတစ္စီးက ကမာၻႀကီးေပၚေရာက္လာၿပီးေတာ့ ကမာၻေပၚကလူေတြကိုတိုက္ခိုက္ေတာ့ပါတယ္။ တိုက္ခိုက္ခံလိုက္ရတဲ့လူေတြသာ အသိစိတ္ေတြေပ်ာက္ဆုံးကာ ခႏၶာကိုယ္ေတြလဲထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရေတာ့ဘဲနဲ႔ အျခားလူေတြကိုပါလိုက္တိုက္ခိုက္ေတာ့တယ္။Haileyတို႔သုံးေယာက္လဲအဲ့ထူးဆန္းတဲ့သတၱဝါေတြလက္က လႊတ္‌ေျမာက္ေအာင္ထြက္ေျပးရေတာ့တယ္။‌လမ္းမွာ Liamဆိုတဲ့လူတစ္ေယာက္နဲ႔ေတြ႕ခဲ့ၿပီးေတာ့ Liamဟာ သူပုန္းေနတဲ့ေနရာကိုေခၚသြားေပးမယ္လို႔ကတိေပးခဲ့တယ္။ Haileyတို႔သုံးေယာက္သား အသက္ရွင္ပါ့မလား။Liamဆိုတဲ့လူကေရာ ယုံၾကည္ရတဲ့လူျဖစ္ပါ့မလားဆိုတာကိုၾကည့္ရႈၾကပါအုံး။ Review – Myet Chel File Size –2.4GB Format…mp4 Quality :1080p WED-DL Genre : Action,Sci-fi Subtitle : Myet Chel Encoded by Arrow ========================================================================================================= App ဒေါင်းရန္ App Link မန်ဘာဝင်လိုသူများ viber – 09691177142